လုချရှော နှငျ့ မားကတျရကျဖို့ဒျတို့ကို အင်ျဂလနျပှဲထှကျလူစာရငျးကနေ ခနျြလှပျထားသငျ့ဟု မျောရငျဟို ဝဖေနျ – the One Sports Journal
ဂြိုဆေး မျောရငျဟိုက အင်ျဂလနျလကျရှေးစငျအသငျးရဲ့ ယူရို ( ၂၀၂၀ ) အဖှငျ့ပှဲစဉျမှာ လုချရှော နှငျ့ မားကတျရကျဖို့ဒျတို့ကို ပှဲထှကျကစားသမားအနနေဲ့ မရှေးခယျြသငျ့ကွောငျး သုံးသပျပွောဆိုလိုကျပါတယျ။ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ နညျးပွဟောငျးက ဂါရတျ ဆောကျဂိတျအနနေဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးမှာ ရှော နှငျ့ ရကျဖို့ဒျတို့ထကျ ပိုကောငျးတဲ့ ရှေးခယျြစရာတှရှေိနကွေောငျး ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
ပျေါတူဂီနညျးပွဟာ အိုးထရတျဖို့ဒျမှာ တာဝနျယူစဉျကာလကလညျး မကွာခဏ ရှောကို ဝဖေနျလရှေိ့သူဖွဈပါတယျ။ မျောရငျဟိုက talkSPORT နဲ့ အစီအစဉျတဈခုအတှငျး ခံစဈကစားသမားရဲ့ ယခုနှဈရာသီ စှမျးဆောငျရညျကို သဘောကပြမေယျ့ ခြဲလျဆီး ဘယျနောကျခံလူ ဘငျ ခြီးဝဲကို အစားထိုးနိုငျဖို့ လုံလာကျမှုရှိတယျလို့ မခံစားရကွောငျး ပွောဆိုခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
နောကျပွီး ရကျဖို့ဒျကလညျး မျောရငျဟိုရဲ့ ပှဲထှကျ ကစားသမားစာရငျးမှာ အကျစတှနျဗီလာကွယျပှငျ့ကို ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့ခွငျးမရှိပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ ဒီး ဟနျဒါဆနျကိုတော့ နံပါတျ ( ၁ ) ဂိုးသမားအနနေဲ့ ရှေးခယျြခဲ့ပါတယျ။ မျောရငျဟိုက “ ဘယျနောကျခံလူနရော အတှကျလား ? ( ၂ ) ခါတှေးစရာမလိုပါဘူး ။ ခြီးဝဲကို ရှေးခယျြပါလိမျ့မယျ။”လို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
လုချရှောနဲ့ ပတျသကျပွီးမေးမွနျးရာမှာ လကျရှိရိုးမားနညျးပွက “ သူက ကောငျးမှနျတဲ့ ဘောလုံးရာသီတဈခု ပိုငျဆိုငျခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့အထငျ ခြီးဝဲက အထူးသဖွငျ့ ဘောလုံးရှိခြိနျမှာ ပိုကောငျးတယျလို့ ထငျပါတယျ။ ဖိအားတှေ‌အောကျမှာ တညျတညျငွိမျငွိမျ ကစားနိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျော ခြီးဝဲကို ပိုကွိုကျပါတယျ။”လို့ ဆိုပါတယျ။
ရကျဖို့ဒျမပါဝငျမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး မေးမွနျးရာမှာ “ ကြှနျတေျာ့အတှကျ ဂရေးလဈရဲ့ စှမျးဆောငျရညျက အံမခနျးပါ ။ သူက “ကြှနျ‌တေျာ့ဆီ ဘောလုံးသာပေးခဲ့ ၊ ပွဿနာအားလုံး ပွလေညျသှားစရေမယျ ။” ဆိုတဲ့ ကစားသမားမြိုးပါ ။သူ့ရဲ့ ဘောလုံးကစားဟနျ ၊ တိုကျစဈဆငျမှုတှကေ လုံးဝကောငျးမှနျပါတယျ။ သူ့ကွောငျ့ ပွဈဒဏျဘောတှရေတယျ၊ ပငျနယျတီတှရေတယျ ၊ ကြှနျတျော သူ့ကို အရမျးကွိုကျပါတယျ။” လို့ ဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။
လုခ်ရှော နှင့် မားကတ်ရက်ဖို့ဒ်တို့ကို အင်္ဂလန်ပွဲထွက်လူစာရင်းကနေ ချန်လှပ်ထားသင့်ဟု မော်ရင်ဟို ဝေဖန်
ဂျိုဆေး မော်ရင်ဟိုက အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ ယူရို ( ၂၀၂၀ ) အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ လုခ်ရှော နှင့် မားကတ်ရက်ဖို့ဒ်တို့ကို ပွဲထွက်ကစားသမားအနေနဲ့ မရွေးချယ်သင့်ကြောင်း သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နည်းပြဟောင်းက ဂါရတ် ဆောက်ဂိတ်အနေနဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းမှာ ရှော နှင့် ရက်ဖို့ဒ်တို့ထက် ပိုကောင်းတဲ့ ရွေးချယ်စရာတွေရှိနေကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပေါ်တူဂီနည်းပြဟာ အိုးထရတ်ဖို့ဒ်မှာ တာဝန်ယူစဉ်ကာလကလည်း မကြာခဏ ရှောကို ဝေဖန်လေ့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ မော်ရင်ဟိုက talkSPORT နဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုအတွင်း ခံစစ်ကစားသမားရဲ့ ယခုနှစ်ရာသီ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သဘောကျပေမယ့် ချဲလ်ဆီး ဘယ်နောက်ခံလူ ဘင် ချီးဝဲကို အစားထိုးနိုင်ဖို့ လုံလာက်မှုရှိတယ်လို့ မခံစားရကြောင်း ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ရက်ဖို့ဒ်ကလည်း မော်ရင်ဟိုရဲ့ ပွဲထွက် ကစားသမားစာရင်းမှာ အက်စတွန်ဗီလာကြယ်ပွင့်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဒီး ဟန်ဒါဆန်ကိုတော့ နံပါတ် ( ၁ ) ဂိုးသမားအနေနဲ့ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ မော်ရင်ဟိုက “ ဘယ်နောက်ခံလူနေရာ အတွက်လား ? ( ၂ ) ခါတွေးစရာမလိုပါဘူး ။ ချီးဝဲကို ရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်။”လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
လုခ်ရှောနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရာမှာ လက်ရှိရိုးမားနည်းပြက “ သူက ကောင်းမွန်တဲ့ ဘောလုံးရာသီတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အထင် ချီးဝဲက အထူးသဖြင့် ဘောလုံးရှိချိန်မှာ ပိုကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဖိအားတွေ‌အောက်မှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ကစားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ချီးဝဲကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။”လို့ ဆိုပါတယ်။
ရက်ဖို့ဒ်မပါဝင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းရာမှာ “ ကျွန်တော့်အတွက် ဂရေးလစ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က အံမခန်းပါ ။ သူက “ကျွန်‌တော့်ဆီ ဘောလုံးသာပေးခဲ့ ၊ ပြဿနာအားလုံး ပြေလည်သွားစေရမယ် ။” ဆိုတဲ့ ကစားသမားမျိုးပါ ။သူ့ရဲ့ ဘောလုံးကစားဟန် ၊ တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေက လုံးဝကောင်းမွန်ပါတယ်။ သူ့ကြောင့် ပြစ်ဒဏ်ဘောတွေရတယ်၊ ပင်နယ်တီတွေရတယ် ၊ ကျွန်တော် သူ့ကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။” လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟနျဒါဆနျနဲ့ စတာလငျးတို့ ဗွိတိနျဘုရငျမကွီးရဲ့မှေးနဂေု့ဏျပွုမှုအဖွဈ MBE (Member of Britain Empire)ဘှဲ့ကို ခြီးမွှငျ့ခံခဲ့ရ